नेपाल आइडलको ‘फिनाले’ कतारमा हुने पक्का
काठमाडौँ, ११ भदौ । नेपाल आइडलको ‘फिनाले’ कतारको एसियन क्रिकेट टाउनमा आउँदो असोज ६ गते हुने भएको छ । अनेस्क वान इन्टरनेसनल क्यानडा र एभरेस्ट युथ एसोसिएसन कतारको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम हुने भएको हो । दोहामा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यक्रमका लागि तयारी चलिरहेको एभरेष्ट युथ एशोसिएसनका अध्यक्ष उत्तम गुरुङले जानकारी दिए । कार्यक्रममा वरिष्ठ संगीतकार शक्ति बल्लभको प्रमुख आतिथ्यता…
सुन्दर छ ‘जोनी जेन्टलम्यान’, भदौ ३० गतेबाट प्रदर्शन हुने (ट्रेलरसहित)
काठमाडौँ, ६ साउन । प्रेमिल जोडी पल शाह र आँचल शर्मा स्टारर फिल्म ‘जोनी जेन्टलम्यान’ को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । ट्रेलरनमा निकै सुन्दर लाग्ने पल र आचँलको जोडी स्टारर फिल्ममा एक्सन, लभ, रोमान्स अथाह छ । यही अथाह हेर्न हलसम्म दर्शक कति आउँछन ? असोजसम्म थाहा हुनेछ । नितिन चन्दले निर्देशन गरेको फिल्ममा महेश दवाडीको संवाद, कथा तथा स्क्रिप्ट छ…
तपाईले आमाजत्तिकै माया बालाई पनि गर्नुहुन्छ ? अहँ गर्नुहुन्न यसकारण (भिडियोसहित)
“बा ” मैले धेरै पढेँ आमाका बेदनाका कथाहरु तर कहिल्यै पढिन बाका अनुहारमा सलबलाएका दु:खका बक्र रेखाहरु धेरै पटक कविहरुले आमाकै तारिफमा कबिता कोरे आमाकै गीत संगीत भरे आमालाई धर्ती भन्नेहरुले बालाई कहिल्यै आकाश भनेनन् र त बा सँधै ओझेल परे । हाम्रो अँधेरो मेटाउन मैन झै जलिरहे हाम्रा खुसी समेट्न मोनो रेल झैं चलिरहे जिन्दगी भर कुदिरहे कुदिरहे थाकेर…
१६-२६ वर्षसम्मका युवाले मिष्टर एण्ड मिस प्लानेट सौन्दर्य प्रतियोगितामा भाग लिन पाउने
काठमाडौँ, ३१ साउन । एसएन इनटरटेन्मेण्ट प्रालिले मिष्टर एण्ड मिस प्लानेट नेपाली सिजन-१ (सौन्दर्य प्रतियोगिता) गर्न लागेको छ । प्रतियोगितामा १६ देखि २६ वर्षसम्मका युवाले सहभागिता जनाउन सक्ने छन् । अडिसनमा हरेक भेग र हरेक ठाउँका नेपाली सहभागी हुनसक्ने छन् । अडिसनको फर्म एसएन इनटरटेन्मेण्ट प्रालिको कार्यालय अनामनगरमा राखिएको छ । अडिसनपछि उत्कृष्ट १५ युवक र १५ युवती छनोट गरी…
मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला, तर तिमीसँगै म मरिदिन सक्छु (भिडियोसहित)
अमेरिका पलायनबाट नेपालमै करियर फर्काउन लागेका नायक रमेश उप्रेति अभिनित फिल्म ‘ऐश्वर्य’को गीत सार्वजनिक भएको छ । ‘गीत यति मठो छ की, त्यही एउटा गीतले दर्शकलाई हलसम्म तान्ने क्षमता बोकेको छ । अहिलेका व्यस्त गीतकार र संगीतकार अर्जुन पोखरेलको रचना र संगीतमा गीत सार्वजनिक भएको हो । गीतमा सुगम पोखरेल र अन्जु पन्तको स्वर छ । रमेशले नै डेब्यु गराएकी दिपिका प्रसाईले…
हेर्नुहोस बलिउड ‘भूमि’मा सञ्जय दत्तको कमब्याक (ट्रेलरसहित)
एजेन्सी, २७ साउन । सेप्टेम्बर २२ मा रिलिज हुने गरी सञ्जय दत्त अभिनित फिल्म ‘भूमि’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । लामो समय फिल्मभन्दा बाहिर रहेका उनी आशातित र निकै एक्सन भूमिकामार्फत बलिउडमा कमब्याक गर्न लागेका हुन । स्मरण रहोस यसअघि उनी अवैध हतियार राखेको र मुम्बई आक्रमणमा दोषी रहेको आरोपमा लामो समय जेल सजाय काटेर रिहा भएका हुन । उमंग…
सन् २०१८ को ‘ह्याप्पी न्यु इअर’को टिजर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
देव कुमार श्रेष्ठले निर्देशन गरेको ह्याप्पी न्यु इअरको टिजर सार्वजनिक भएको छ । निर्माता कुशल थापा आफै निर्माता र अभिनेता रहेको फिल्मको टिजर साउने झरीमा सार्वजनिक गरिएको हो । फिल्ममा सन्ध्या केसी र पुकार गौतमको लिड रोल छ । नेपाल र अष्ट्रेलियाका विभिन्न ठाउँमा छायांकन गरिएको फिल्ममा प्रेमको कथा छ । फिल्म आउदो सन् २०१८ को पहिलो हप्ता पौष २४…
यस्तो छ ‘सिक्रेट सुपरस्टार’को ट्रेलरमा आमिर खानको नयाँ लुक्स (भिडियोसहित)
दंगलले आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा कठिन र चुनौतिपूर्ण समयको अभिनेता साबित गरेका आमिर खानले नयाँ रुप फेरेका छन । खासगरी गत बर्षकै उत्कृष्ट फिल्म बनेको दंगलमा एक कुशल र मेहेनती बुवाको चरित्र अभिनय गरेका आमिरले युवा क्रेजी सेलिब्रेटीको अभिनयसहित नयाँ फिल्मको ट्रेलर सार्वजनिक गरेका हुन । र उनकी पत्नी किरण रावको निमार्ण र अद्वैत चन्दनको निर्देशन रहेको चलचित्र ‘सिक्रेट सुपरस्टार’ को…
फेरियो रेखा र आर्यनको स्टारडम, ‘चिरबिर चिरबिर’मा देखियो चल्तीको नृत्य
कुनै बेलाका नम्बर एक नायक नायिका हुन आर्यन सिग्देल र रेखा थापा । तर तिनै स्टारडम भएका नायक नायिकाको स्टाइल चाँही फेरिएको छ ।कसले चोर्यो मेरो मन, किस्मत लगायत हिट फिल्म दिएका दुबै नायक नायिका अभिनित नयाँ फिल्ममा भने पुरै अहिलेका केटाकेटीको नृत्य हावी छ । कुटुमा कुटु, पूर्व पश्चिम रेल, सुर्के थैलीजस्ता चर्चित गीतका रचनाकार, संगीतकार र गायक राजनराज शिवाकोटीकै…
हेर्नुहोस पल शाहको नयाँ स्टारडम ‘कार्टुन्ज क्रु’ भिडियोमा
रोमान्टिक ‘कार्टुन्ज क्रु’ लाई फिचरिङ गरिएको नयाँ गीत ‘जता जता पिरतीको बाटो सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जाल युट्युबमार्फत गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको हो । सार्वजनिक गीत गतबर्ष सार्वजनिक भएको पल शाह र धुर्मुस सुन्तली अभिनित ‘तिमीलाई देखेपछि आई लभ यु भन्न मन लाग्यो’ गीतको सिक्वेलको रुपमा ल्याइएको दाबी गरिएको छ । तर गीतले युवाहरुको मन छुने निश्चित छ । रिलिजलगत्तै…
केकी बनिन विशालकी ‘सानुमाया’ (भिडियोसहित)
मोडल विकास राई र नायिका केकी अधिकारीले मोडलिङ गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । धन साम्पङ राईको आवाजमा रहेको गीतको भिडियोमा केकी र विशालले अभिनय गरेका हुन । राकेश किरातीले निर्देशन गरेको भिडियोको गुणस्तर भने उच्चस्तरको देखिएको छ । स्लो आधुनिक गीत भएपनि विशाल र केकीले खुलेर हट अभिनय गरेका छन ।
“२ रुपैयाँ”को ट्रेलरमा निश्चलको रुप, सस्पेन्स एक्सन !
नेपाली फिल्मका चर्चित र भेट्रान निर्देशक निश्चल बस्नेत लिड रोलमा रहेको फिल्म २ रुपैयाँको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । २४ घण्टा नबित्दै २ लाख बढीले हेरेर धेरै रेकर्ड पछाडी छाडेको ट्रेलरले पनि फिल्म चल्ने संकेत देखाएको छ । फिल्ममा एक्सनलाई मुख्य विषय बनाएपनि टे«लरमा भने सस्पेन्समा राखिएको छ । असिम शाहले निर्देशन गरेको फिल्म यसअघिको कुटुमा कुटु गीतले व्यापक चर्चा पाइसकेको…
आखिर कसको प्रेममा छन सनम ? यति भावुक हुनलाई
आधुनिकमा पनि सेन्टिमेन्टल गीतमा एकछत्र राज गरेर मोडलिङमा जमेका मोडल सनम कठायत लामो समयदेखि प्रेममा छन ।तर अहिलेसम्म उनको प्रेम खुलेको छैन । उनले खुलाउन नचाहेरै प्रेम नखुलेको हो । विभिन्न मोडलसंग उनको नाम जोडिएपनि त्यसको पुष्टि भएको छैन । तर पछिल्लो समय उनी निकै भावुक देखिएका छन । यतिसम्म की आफु गहिरो प्रेममा रहेको तस्बिर बाहिरिदा भिडियो पनि खेलेका…
सन्नी लियाने आमा बन्दैछिन, तर सरोगेसीबाट बच्चा जन्माउने !
पोर्नस्टार तर हालकी बलिउड चर्चित अभिनेत्री सनी लियोन आमा बन्ने खबरले यतिबेला बलिउड गर्माएको छ । यो खबर उनी आफैले बाहिर ल्याएकी हुन । भारतीय सञ्चारमाध्यमसंगको अन्तर्वातामा उनले आफू गर्भवती भएको खुलासा गरेकी हुन । उनले आमा बन्न शारीरिक रूपमा आफूलाई मुस्किल हुन सक्ने बताएकी छन । तर उनले गर्भ सरोगेसी मार्फत बच्चा जन्माउने पनि भारतीय मिडियाको दाबी छ । उनी भाडाको कोख…
फिल्म फ्लप भएर अलप भएकी नायिका पुजना प्रधान बनिन चौकिदार (भिडियोसहित)
कुनै समय चल्तीकी नायिका पुजना प्रधान पछिल्लो समय सुरक्षा गार्ड बनेकी छन । एक फेसियल हाउसमा उनी सुरक्षा गार्डको जागिर गर्ने गरेको एक भिडियो नै सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो समय चकलेट फिल्म बनाएकी उनी त्यसबाट निकै असफल भएकी थिइन भने त्यसयता लगभग फिल्म खेल्न नै बन्द गरेकी थिइन । तर फिल्मबाट फ्लप भएपनि उनले म्युजिक भिडियो खेल्न छाडेकी छैनन…